Iskuxiraha musuqmaasuqa ee Word iyo Excel > Vielhuber David
Iskuxiraha musuqmaasuqa ee Word iyo Excel06
Mid ayaa u maleynaya in marka la furayo iskuxirayaasha 'Word / Excel document', biraawsarka caadiga ah lagu bilaabo URL-ka la doonayo. Si qariib ah ugu filan, tani maahan kiiska - taas oo u horseedda waxyeelo aan fiicneyn waxayna ka dhigeysaa isku xirnaanta kal-fadhiyada / bogagga kuleylka ku saleysan ku-soo-galista ee barnaamijyada Xafiiska la sheegay inaysan macquul ahayn.
Tan waxa u sabab ah qaybta loo yaqaan "Agent User: Microsoft Office Existence Discovery" oo ay soo saartay shirkadda Microsoft, taas oo horay u soo rarta isku xirka asalka isla markaana raadraacaya wax kasta oo loo diro. Dhibaatada waa la soo saari karaa sida soo socota: Marka hore waxaad abuureysaa laba feylal oo la yiraahdo "loggedin.php" (bogga kujira meesha lagu soo galay) iyo "login.php" (bogga loogu talagalay galitaanka):
Ka dib markaad toos u soo wacdo "loggedin.php", waxaad toos u tageysaa "login.php" ee gobolka asalka ah, halkaas oo cookie "logged_in" isla markiiba la dhigo. Ka dib markaad mar labaad soo wacdo "loggedin.php", waxaad heshay fariin "waad diiwaangashan tahay ". Haddii aad ku xiranto" loggedin.php "gudahood Ereyga ama Excel (nooca 2007 ama goor dambe), waxaad had iyo jeer si toos ah u heli doontaa" login.php ", iyadoon loo eegin inaad horay u soo gashay iyo in kale.
Barnaamijyada Xafiiska waxay ka bilaabayaan qayb Internet Explorer gadaal si loo hubiyo in URL-ka jiro iyo in kale. Jihooyin kasta ayaa sidoo kale lala socdaa dhamaadka iyo cinwaanka ugu dambeeya ee aan dib loo soo celin (kiiskeena "login.php") waa la soo celiyaa waxaana loogu yeeraa biraawsarka caadiga ah.: